Ezona ndlela ziBuchule zokuFumana abaThengi kwi-Intanethi | Martech Zone
Eyona ndlela ibalaseleyo yokuFumana abaThengi kwi-Intanethi
NgoLwesibini, nge-29 kaDisemba ngo-2015 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Nokuba uyathanda okanye awuthandi, lonke ishishini linomnyango ojikelezayo wabathengi abaza behamba. Sonke sinokwenza izinto ezonyusa ukugcinwa kwaye sinciphise iindleko ezongezelelweyo kunye neenzame ezinxulumene nokufumana abathengi abatsha, kodwa abathengi abadala basaya kushiya izizathu ezingaphandle kolawulo lwethu.
I-ELIV8 iyile enye into ebalaseleyo infographic eneendlela ezi-7 ezibalaseleyo zokufumana Ukuqinisekisa ukuba izicwangciso zakho zokuthengisa kwi-intanethi zisebenza ngokusebenza kakuhle.
Usesho Lwemvelo isabalulekile. Sebenzisa iindlela ezifanelekileyo zomxholo kunye nokwenza ngcono iqonga lakho kunye nomxholo kunokuqhuba ukugcwala kwabantu abaninzi. Ngapha koko, iipesenti ezingama-80 zabantu bayazityeshela iintengiso ezihlawulelweyo kwaye endaweni yoko bajolise kwiziphumo ze-organic kunye ne-75% yabantu abangazange badlule kwiphepha elidlulileyo leziphumo zophando.
Igunya lokukrola -Yila kwaye ukhuthaze umxholo ofumana i-backlinks kwiindawo ezisemagunyeni, umxholo wakho kunye newebhusayithi ziya kufumana amanqanaba aphezulu enjini yokukhangela kwaye ufumane iindwendwe kwiindawo ezifanelekileyo ezinxibelelana nawe. Igunya lokukrola linokonyusa ukukhangelwa kwe-organic ngama-250% kwiphepha olifunayo.
Ukuthengisa -Bandakanya abachaphazeli abasele benabaphulaphuli obafunayo, emva koko usebenzise abaphulaphuli ukuba bazakhele ngokwakho, unokufumana abathengi abatsha ngesantya sombane. Kwi-avareji, ukuthengisa okuphembelelayo ubona ukubuya kwe-6-to-1 kutyalo-mali.
Ukuhanjiswa oku-2 -Kumashishini amaninzi, iipesenti ezingama-65 zeshishini elitsha zivela kubathengi abathunyelwe kubo. Ukuthunyelwa kumacala amabini kulapho bobabini umthumeli abahlobo babo bafumana umvuzo ngokuthatha inxaxheba. Abantu bane-2X kunokwenzeka ukuba bathenge xa ​​bethunyelwa ngumhlobo.
Umxholo oJolise kwiNtengiso -I-61% yabantu bathi kunokwenzeka ukuba bathenge kwi-brand ehambisa umxholo. Xa usenza i-infographics, amaphepha amhlophe, kunye neevidiyo eziqhubela undwendwe kwindawo yokubiza, uya kwandisa ukuthengisa.
email Marketing -Idola nganye echithwe nge-imeyile ine-avareji yokubuya kwe- $ 1 yokuziqhelanisa nenkqubo yokukhulisa ekhokelela kwii-imeyile ekujoliswe kuzo ukomeleza iziphumo zakho zokufumana. Ukuzenzekelayo kwentengiso kunokunyusa ingeniso nge-44% kwiinyanga nje ezi-10-6
Uhlalutyo - Iipesenti ezingama-50 zamashishini zikufumana kunzima ukubeka intengiso ngqo kwiziphumo zengeniso. Chonga amajelo akho aphezulu okuguqula usebenzisa kubahlalutyi. Akukho shishini laneleyo ligxininisa ukubaluleka kokulinganisa ukuthengisa kwe-ROI.
tags: Ukudluliselwa kwamacala amabiniUkufumanaUhlalutyoigunya lokukrolaukufunyanwa kwabathengiemail Marketingukuthengisa okunempembelelouphando lwezinto eziphilayoukubhekisaumxholo ojolise kwintengisoSEO
Ngomhla wama-30 ku-Disemba 2015 ngo-6: 10 AM
Ucacise ngobuqaqawuli amaqhinga asixhenxe amahle okuthengisa ukuthengwa kwabathengi okukhawulezayo, ngokuqinisekileyo oku kuya kunceda ishishini lam likhule ngokufanelekileyo. Enkosi ngesabelo.